မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု
Post byစိုးချစ်ချစ်ပိုင်(AMIA) on Tuesday, April 02,2019
ချင်းပြည်နယ်တွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ ခရီးသွား၊ လျှပ်စစ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည့်ကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ၇ နှစ် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ချင်းပြည်နယ်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့ ဒေသထွက် ကုန်ပြပွဲကို ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ တတိယပတ်အတွင်းက ကျင်းပခဲ့ပါ တယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး အလားအလာ အကောင်းဆုံးကဏ္ဍတွေထဲမှာ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ တိုးတက်ဖို့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းနဲ့ အလားအလာ ကောင်း တွေ အကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးကို AMIA- Farmer Digital TV ရဲ့ သတင်းထောက် မစိုးချစ်ချစ်ပိုင်က သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ လက်ရှိပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေ ၀င်ရောက်ထားတဲ့အခြေ အနေ ကို သိချင်ပါတယ် ရှင့်။
ဖြေ။ ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ သူရဲ့အလားအလာ အကောင်းဆုံး ကဏ္ဍကတော့ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ပေါ့။ အလားအလာကောင်းတဲ့ ကဏ္ဍဖြစ်သော်ငြားလည်း ခုချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်ကို တင် ပြလာပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေ ချင်းပြည်နယ်မှာ မရှိသေးဘူး။ ဒါကြောင့် ချင်း ပြည်နယ်ရဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လုပ်လို့ကိုင်လို့ရတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ၊ အလားအ လာတွေကို ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့ ဒေသထွက်ကုန်ပြပွဲမှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြခန်းတွေမှာလဲ ပြထားတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေးကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာဖို့ နောက်တစ်ချက်က ချင်းပြည်နယ်မှာ တိမ်မြှပ်နေတဲ့ လူသိနည်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ဖော်ထုတ်အသိပေးတဲ့ သဘောပါ။
မေး။ ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ မ၀င်လာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာတွေ များ ဖြစ်နိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိက ကတော့ ချင်းပြည်နယ်က လူဦးရေ နည်းတော့ ဈေးကွက်သေးတာပေါ့။ ဒီတော့ဈေး ကွက်ကို မှုတည်ပြီး လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေက မသွားကြဘူး။ နံပါတ်(၂) ကတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက မ ကောင်းသေးဘူး။ ခက်ခဲတယ်။ သွားလို့လာလို့ မလွယ်တဲ့အတွက် ကြောင့် လူသိပ်မသိဘူး။ အဲတော့ ရင်းနှီး မြှပ်နှံတဲ့သူတွေ နည်းတယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ ဒီနှစ်ချက်ပါ။
မေး။ ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းတွေရှိပေမယ့် ဖော်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ဘာလုပ်ငန်းတွေလဲ။
ဖြေ။ ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ တိမ်မြှပ်နေတဲ့၊ လူသိနည်းတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပိုး ထည်လုပ်ငန်း၊ ပိုးချည်လုပ်ငန်းဆိုရင် ဟိုးအရင်ကတည်းက တော်တော်လေး အောင်အောင်မြင်မြင် ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ခုမြှပ်သွားတယ်ပေါ့။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ပြန်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ပြီးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကော်ဖီပေါ့ ။ ချင်းပြည်နယ်က ထွက်တဲ့ ကော်ဖီက တော် တော်ကောင်းတယ်။ Export အရည်အသွေးလဲမှီတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသိနည်းနေတယ်။ ဒါလေးတွေမှာ ရင်းနှီး မြှပ်နှံမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကျွန်တော်တို့က ဖိတ်ခေါ်မယ်။ နောက်ချင်းပြည်နယ်က ထွက်တဲ့ ၀ဥ လိုဟာမျိုး၊ အော် ဂဲလ်နစ်ပေါ့။ ဒါတွေက ဈေးကွက်မှာ ၀ယ်လိုအား အရမ်းရှိတယ်။ လူကြိုက်လဲများတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မသိကြ ဘူးပေါ့။ ဒီမှာလည်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ လိုနေတယ်။ နောက်တစ်ခါက ထောပတ်သီး၊ ချင်းပြည်နယ်က ထွက်တဲ့ ထောပတ်သီးက မနှစ်ကလုပ်တဲ့ ထောပတ်သီးပြပွဲမှာ ဆုတွေရတယ်။ သူမှာ တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးမှီ ထောပတ်သီးတွေ ရှိတယ်။ ထောပတ်သီးကလဲ အခုကမ္ဘာပေါ်မှာ တော်တော်လေး လူကြ်ိုက် များလာတဲ့ ကျန်းမာရေးသီးနှံ တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးက ချင်းတောင်မှာ အကုန်ရှိနေတယ်။ ဒါပေ မယ့်လည်း မသိကြဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့က ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပေး ဖို့အတွက် လုပ်တယ်။
မေး။ ။ ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာဖို့အတွက် လက်ရှိဘာတွေ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နေပါသ လဲ။
ဖြေ။ ။ DICA ရုံးခွဲလည်း ချင်းပြည်နယ်မှာ ဖွင့်ထားတယ်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လုပ်မယ့်သူတွေကို ရုံးခွဲကလည်း လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ ပေးတယ်။ ပြည်ထောင်စုက ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်ကော၊ ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ၀န်ကြီး ချုပ်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မတီကော ပေါင်းပြီးတော့၊ နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီး မြှပ်နှံသူတွေလည်း ဖိတ်မယ်။ ပြည်းတွင်းက စိတ်ဝင်စားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ဖိတ်မယ်။ ပြီးတော့ ချင်းပြည်နယ်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ မှုတွေများများ ၀င်လာအောင် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ ၀င်ရောက်လာအောင် ဘယ်အချက်တွေနဲ့ ဆွဲ ဆောင်ထားလဲ။
ဖြေ။ ။ ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု သွားလုပ်မယ့်သူသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ၊ ခရီးသွားကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်တဲ့ကဏ္ဍ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဒီကဏ္ဍတွေမှာ သွား လုပ်မယ်ဆိုရင် အားလုံးကို ၀င်ငွေခွန် ကင်းလွှတ်ခွင့် (၇) နှစ် ပေးမယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို့လုပ်ငန်းမှာ လို အပ်လို့ ပြည်ပကသွင်းလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ကျန်တဲ့ အခွန်ကင်းလွှတ်ခွင့်တွေ ပေးမယ်။ အဲတော့ ချင်း ပြည်နယ်မှာ သွားလုပ်တဲ့သူတွေဟာ ကျန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်တွေမှာ လုပ်တာထက် ပိုပြီးတော့ အခွန် ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ လက်ရှိမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဝင် ရောက်ထားမှု အခြေအနေနဲ့ အလားအလာလေးကိုလည်း သုံးသပ်ပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေးကဏ္ဍကတော့ တစ်ကယ်တမ်းပြောရရင် ၀င်ရောက်မှုအား မကောင်း သေးဘူး။ ဒီကဏ္ဍမှာ စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုရဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အားနည်းသေး တယ်။ တော်တော်များများ ဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုအပ်မှာပေါ့။ ဒီကဏ္ဍမှာ လက်ရှိအဓိက လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံနေ တာကတော့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေပါပဲ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင် စင်ကာပှု၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ် အဓိက ဒီနိုင်ငံတွေ လာလုပ်ကြတာ များပါတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်အချက်တွေကြောင့် ၀င်ရောက်မှု နည်းနေရတာလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကတော့ ချက်ချင်းအကျိုးအမြတ် မပေါ်ဘူး။ နှစ်ရှည် လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုတော့ စက်ရုံထောင်လိုက်ရင် စက်ရုံက ဒီနှစ်ထောင်ပြီးတာနဲ့ ပစ္စည်းထထုတ်လို့ ရတာကို။ စိုက် ပျိုးရေးကဏ္ဍကတော့ ကာလတစ်ခု အချိန်ပေးရတော့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ကျန်တဲ့ကဏ္ဍ လောက် မများဘူး။ နောက်တစ်ချက်က စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ မြေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆောင် ရွက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ကောင်းကောင်း မရှိသေးဘူး။ တစ်ချို့ ဥပဒေတွေ ပြင်ဆင် စရာရှိနေသေးတယ်။ တစ်ချို့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းဖို့ လိုနေသေးတယ် ။ ဒီအခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေတယ်။
အခုလို ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်ရှင့်။
ရန္ကုန်၊ ဧပြီ ၂
ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုတျြေမွင့်တင္နိုင္ဖို့ ရည်ရြယ်ပြီးတော့ ခ်င်ျးပည္နယ် ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုနဲ့ ဒေသထြက် ကုန်ျပပြဲကို ဗဟိုအစိုးရနျဲ့ပည္နယ်အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ မတ္လ တတိယပတ်အတြင်းက က်င်းပခဲ့ပါ တယ်။ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး အလားအလာ အေကာင်းဆုံးကဏ္ဍေတြထဲမွာ စိုက္ပ်ိုး၊ မြေျးမူရေးကဏ္ဍလည်း ပါဝင္ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခ်င်ျးပည္နယ်ရဲ့ စိုက္ပ်ိုးရေးကဏ္ဍ တိုးတက္ဖို့ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှု အခြင့်အလမ်းနဲ့ အလားအလာ ကောင်း တြေ အေကြာင်းကျိုမန္မာနိုင်ငံ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုက္မောရွင် အတြင်းရေးမွူး ဦးအောင္နိုင်ဦးကို AMIA- Farmer Digital TV ရဲ့ သတင်းထောက် မစိုးခ်စ္ခ်စ္ပိုင္က သြားရောက်တြေ့ဆုံ မေျးမန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ လက်ရျွိပည္တငြ်း၊ျပည္ပ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုလုပ်ငန်းတြေ ၀င်ရောက္ထားတဲ့အျေခ အေန ကို သိခ်င္ပါတယ် ရွင့်။
ျေဖ။ ။ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ သူရဲ့အလားအလာ အေကာင်းဆုံး ကဏ္ဍကေတာ့ စိုက္ပ်ိုးရေးနဲ့ မြေျးမူရေးကဏ္ဍ ပေါ့။ အလားအလာကောင်းတဲ့ ကဏ္ဍျဖစ်သော်ျငားလည်း ခုခ်ိန္ထျိမန္မာနိုင်ငံ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုက္မောရွင္ကို တင်ျပလာပြီး ဆောင်ရြက္တဲ့ စိုက္ပ်ိုးရေး၊ မြေျးမူရေး လုပ်ငန်းတြေ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ မရွိသေးဘူး။ ဒါကြောင့် ခ်င်ျးပည္နယ်ရဲ့ စိုက္ပ်ိုးရေး၊ မြေျးမူရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လုပ္လို့ကိုင္လို့ရတဲ့ အခြင့်အလမ်းတြေ၊ အလားအ လာတြေကို ခ်င်ျးပည္နယ် ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုနဲ့ ဒေသထြက္ကုန်ျပပြဲမွာ သက္ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရွိသူတြေက ရွင်ျးပခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတေျာ့ပခန်းတြေမွာလျဲပထားတယ်။ ရည်ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ခ်င်ျးပည္နယ်ရဲ့ စိုက္ပ်ိုးမြေျးမူ ရေးကဏ္ဍမွာ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုတြေ ၀င္လာဖို့ နောက္တစ္ခ်က္က ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ တိမ်ျမွပ်နေတဲ့ လူသိနည်းတဲ့ လုပ်ငန်းတြေကျိုပည္တငြ်း၊ျပည္ပ လုပ်ငန်းရွင်တြေကို ဖ္ထောုတ်အသိပေးတဲ့ သေဘာပါ။
မေး။ ။ ခ်င်ျးပည္နယ္မျွာပည္တငြ်း၊ျပည္ပ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုတြေ မ၀င္လာရျခင်းရဲ့ အေကြာင်းရင်းက ဘာတြေ မ်ာျးဖစ္နိုင္မလဲ။
ျေဖ။ ။ အဓိက ကေတာ့ ခ်င်ျးပည္နယ္က လူဦးရေ နည်းတော့ စေ်းကြက်သေးတာပေါ့။ ဒီတော့စေ်း ကြက္ကို မှုတည်ပြီး လုပ္တဲ့လုပ်ငန်းတြေက မသြားကြဘူး။ နံပါတ်(၂) ကေတာ့ လမ်းပန်းဆက်သြယ်ရေးက မ ကောင်းသေးဘူး။ ခက္ခဲတယ်။ သြားလို့လာလို့ မလြယ္တဲ့အတြက် ကြောင့် လူသိပ္မသိဘူး။ အဲတော့ ရင်းနွီျးမွပ္နွံတဲ့သူတြေ နည်းတယ်။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ဒီနွစ္ခ်က္ပါ။
မေး။ ။ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှု အခြင့်အလမ်းတြေရွိပေမယ့် ဖ္ထောုတ္ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတြေက ဘာလုပ်ငန်းတြေလဲ။
ျေဖ။ ။ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ တိမ်ျမွပ်နေတဲ့၊ လူသိနည်းတဲ့ လုပ်ငန်းတြေ အမ်ားကြီးရွိတယ်။ ဥပမာအာျးဖင့် ပိုး ထည္လုပ်ငန်း၊ ပိုးခ်ည္လုပ်ငန်းဆိုရင် ဟိုးအရင္ကတည်းက တော်တော်လေး အောင်အောင်ျမင်ျမင် ရွိခဲ့ဖူးတယ်။ ချုမွပ်သြားတယ်ပေါ့။ ဒါကို ကျန်ြတ္တောို့ကျပန်ဖ္ထောုတ်ပြီးတော့ ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီျးပန်ပြီျးမွင့်တင် ဆောင်ရြက်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ နောက္တစ္ခုက က္ဖောီပေါ့ ။ ခ်င်ျးပည္နယ္က ထြက္တဲ့ က္ဖောီက တော် တော်ကောင်းတယ်။ Export အရည်အေသြးလဲမွီတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသိနည်းနေတယ်။ ဒါလေးတြေမွာ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တြေကို ကျန်ြတ္တောို့က ဖိတ်ခေါ်မယ်။ နောက္ခ်င်ျးပည္နယ္က ထြက္တဲ့ ၀ဥ လိုဟာမ်ိုး၊ အော် ဂဲလ္နစ်ပေါ့။ ဒါတြေက စေ်းကြက္မွာ ၀ယ္လိုအား အရမ်းရွိတယ်။ လူကြိုက္လဲမ်ားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ္မသိကြ ဘူးပေါ့။ ဒီမွာလည်း ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုတြေ လိုနေတယ်။ နောက္တစ္ခါက ထောပတ်သီး၊ ခ်င်ျးပည္နယ္က ထြက္တဲ့ ထောပတ်သီးက မနွစ္ကလုပ္တဲ့ ထောပတ်သီျးပပြဲမွာ ဆုတြေရတယ်။ သူမွာ တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ အရည်အေသြးမွီ ထောပတ်သီးတြေ ရွိတယ်။ ထောပတ်သီးကလဲ အခုကမ္ဘာပေါ်မွာ တော်တော်လေး လူကြ်ိုက် မ်ားလာတဲ့ က်န်းမာရေးသီးနွံ တစ္ချုဖစ္လာတယ်။ ဒါတြေ အားလုံးက ခ်င်းတောင္မွာ အကုန်ရွိနေတယ်။ ဒါပေ မယ့်လည်း မသိကြဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ ကျန်ြတ္တောို့ကျပည္တငြ်း၊ျပည္ပ ရင်းနွီျးမွပ္နွံသူတြေကို ဖိတ်ခေါ်ပေး ဖို့အတြက် လုပ္တယ်။
မေး။ ။ ဒီလုပ်ငန်းတြေမွာ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုတြေ ၀င္လာဖို့အတြက် လက်ရွိဘာတျြေပင္ဆင်ဆောင်ရြက် နေပါသလဲ။
ျေဖ။ ။ DICA ရုံးခြဲလည်း ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ ဖြင့်ထားတယ်။ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှု လုပ္မယ့်သူတြေကို ရုံးခြဲကလည်း လိုအပ္တဲ့ အကူအညီတြေ ပေးတယ်။ျပည်ထောင္စုက ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှု က္မောရွင်ကော၊ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ၀န်ကြီး ခ်ုပ္တို့ ဦးဆောင္တဲ့ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှု က္မောတီကော ပေါင်းပြီးတော့၊ နိုင်ငျံခားက ရင်းနွီျးမွပ္နွံသူတြေလည်း ဖိတ္မယ်။ျပည်းတြင်းက စိတ်ဝင္စားတဲ့ လုပ်ငန်းရွင်တြေလည်း ဖိတ္မယ်။ ပြီးတော့ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ ရင်းနွီျးမွပ္နွံ မှုတြေမ်ားမ်ား ၀င္လာအောင် ဆောင်ရြက်နေတျာဖစ္ပါတယ်။
မေး။ ။ ခ်င်ျးပည္နယ္မျွာပည္တငြ်း၊ျပည္ပ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုတြေ ၀င်ရောက္လာအောင် ဘယ်အခ်က်တြေနဲ့ ဆြဲ ဆောင္ထားလဲ။
ျေဖ။ ။ ခ်င်ျးပည္နယ် ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှု သြားလုပ္မယ့်သူသည် စိုက္ပ်ိုးရေးကဏ္ဍ၊ မြေျးမူရေးကဏ္ဍ၊ ခရီးသြားကဏ္ဍ၊ လ်ွပ္စစ္ဓာတ်အား ထုတ္လုပ္တဲ့ကဏ္ဍ၊ လမ်းပန်းဆက်သြယ်ရေးကဏ္ဍ ဒီကဏ္ဍေတြမွာ သြား လုပ္မယ္ဆိုရင် အားလုံးကို ၀င်ငြေခြန် ကင်းလွှတ္ခြင့် (၇) နွစ် ပေးမယ်။ နောက္တစ္ခုက သူတို့လုပ်ငန်းမွာ လို အပ္လိျု့ပည္ပကသြင်းလာတဲ့ ပစ္စည်းတြေကိုလည်း က်န္တဲ့ အခြန္ကင်းလွှတ္ခြင့်တြေ ပေးမယ်။ အဲတော့ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ သြားလုပ္တဲ့သူတြေဟာ က်န္တဲ့တိုင်းဒေသကြီျးပည္နယ်တြေမွာ လုပ္တာထက် ပိုပြီးတော့ အခြန် ဆိုင်ရာ အခြင့်အေရးတြေ ရရွိမျွာဖစ္ပါတယ်။
မေး။ ။ လက်ရွိမွာ တစ္နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ စိုက္ပ်ိုးရေးနဲ့ မြေျးမူရေးကဏ္ဍမွာ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုဝင် ရောက္ထားမှု အျေခအေနနဲ့ အလားအလာလေးကိုလည်း သုံးသပ်ပေးပါဦး။
ျေဖ။ ။ စိုက္ပ်ိုးရေးနဲ့ မြေျးမူရေးကဏ္ဍကေတာ့ တစ္ကယ္တမ်ျးေပာရရင် ၀င်ရောက္မှုအား မေကာင်း သေးဘူး။ ဒီကဏ္ဍမွာ စုစုပေါင်း ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှုရဲ့ တစ်ရာခိုင္နှုန်းလောက္ပဲ ရွိပါသေးတယ်။ အားနည်းသေး တယ်။ တော်တ္မော်ားမ်ား ဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုအပ္မွာပေါ့။ ဒီကဏ္ဍမွာ လက်ရွိအဓိက လာရောက်ရင်းနွီျးမွပ္နွံနေ တာကေတာ့ ဒေသတြင်း နိုင်ငံတြေပါပဲ စိုက္ပ်ိုးရေးကဏ္ဍမွာဆိုရင် စင္ကာပှု၊ ဂ်ပန်၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ် အဓိက ဒီနိုင်ငံတြေ လာလုပ်ကြတာ မ်ားပါတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်အခ်က်တြေကြာင့် ၀င်ရောက္မှု နည်းနေရတာလဲ။
ျေဖ။ ။ အဓိကကေတာ့ စိုက္ပ်ိုးရေးကဏ္ဍကေတာ့ ခ်က္ခ်င်းအက်ိုးအျမတ် မေပ်ါဘူး။ နွစ်ရွည် လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုတော့ စက်ရုံထောင္လိုက်ရင် စက်ရုံက ဒီနွစ်ထောင်ပြီးတာနဲ့ ပစ္စည်းထထုတ္လို့ ရတာကို။ စိုက် ပ်ိုးရေးကဏ္ဍကေတာ့ ကာလတစ္ခု အခ်ိန်ပေးရေတာ့ ရင်းနွီျးမွပ္နွံသူတြေရဲ့ စိတ်ဝင္စားမှု က်န္တဲ့ကဏ္ဍ လောက် မမ်ားဘူး။ နောက္တစ္ခ်က္က စိုက္ပ်ိုးရေးကဏ္ဍမွာျေမနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရွင်းရွင်းလင်းလင်း ဆောင် ရြက္နိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိုး ကောင်းကောင်း မရွိသေးဘူး။ တစ္ခ်ို့ ဥပေဒေတျြပင္ဆင် စရာရွိနေသးတယ်။ တစ္ခ်ို့ ဥပေဒေတျြပဌာန်းဖို့ လိုနေသးတယ် ။ ဒီအခက်အခဲလေးတြေ ရွိနေတယ်။
အခုလိုျေဖကြားပေးတာ ကေ်းဇူးအထူး တင္ပါတယ်ရွင့်။
Thank you for every one of your hard work on this site. Kim enjoys participating in research and it is easy to see why. A number of us notice all of the dynamic medium you produce reliable steps on this blog and as well as boost response from some others about this topic then my simple princess is truly being taughtagreat deal. Take advantage of the remaining portion of the year. You are performingapretty cool job. coach outlet store
by gnuyyemomq@gmail.com at June 10 2019
I am also writing to let you understand whatanotable encounter my friend's girl undergone visiting yuor web blog. She noticed plenty of issues, with the inclusion of how it is like to have an excellent giving nature to make many more without hassle understand selected hard to do topics. You really exceeded my expectations. I appreciate you for imparting those necessary, trustworthy, educational as well as easy tips about this topic to Lizeth. goyard bags
by wiwhwodebyw@gmail.com at June 08 2019
My wife and i ended up being joyous Chris managed to conclude his basic research through your ideas he got from your very own site. It's not at all simplistic just to be offering helpful hints thatanumber of people could have been trying to sell. And now we do know we now have you to appreciate for that. All the illustrations you've made, the straightforward site navigation, the relationships you help to engender - it's everything wonderful, and it's making our son in addition to the family imagine that the situation is satisfying, and that is very important. Thanks for all the pieces! nike air max shoes
by hflrrgqrypk@gmail.com at June 06 2019
I wish to express my affection for your kind-heartedness giving support to men and women who actually need help on this field. Your special dedication to passing the solution around appears to be really helpful and has without exception made most people like me to get to their objectives. Your amazing valuable tutorial indicatesagreat dealaperson like me and especially to my fellow workers. Many thanks; from all of us. bape hoodie
by bxxlveg@gmail.com at June 04 2019
I must express my affection for your kind-heartedness supporting folks who actually need help on in this field. Your very own dedication to passing the solution across had become amazingly practical and have specifically allowed men and women like me to attain their ambitions. The invaluable recommendations entailsalot to me and extremely more to my fellow workers. With thanks; from each one of us. yeezy boost 350
by hbwlpskerw@gmail.com at June 03 2019
I would like to convey my passion for your generosity supporting persons that should have help on your matter. Your real dedication to getting the solution across became rather helpful and has regularly empowered those like me to achieve their desired goals. Your amazing useful guidelines entails so muchaperson like me and still more to my mates. Warm regards; from each one of us. michael kors handbags
by bgayrcuxv@gmail.com at June 03 2019
My husband and i got quite fulfilled that Peter could finish up his research through your precious recommendations he obtained from your own weblog. It is now and again perplexing to simply find yourself giving away solutions that many others have been trying to sell. So we realize we have the blog owner to be grateful to for that. Most of the illustrations you've made, the simple web site navigation, the relationships you will give support to promote - it's all powerful, and it's helping our son and the family believe that this situation is satisfying, and that's particularly indispensable. Thanks for the whole lot! balenciaga triple s
by owlteib@gmail.com at May 31 2019
I together with my friends ended up digesting the great tricks from the blog then instantly I had an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those techniques. My boys came for this reason glad to read through them and have now withoutadoubt been taking advantage of these things. Appreciation for indeed being so kind and for obtaining these kinds of excellent tips most people are really desperate to understand about. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner. hermes belts
by feuomggbujp@gmail.com at May 30 2019
I precisely had to appreciate you once again. I'm not certain the things that I might have carried out in the absence of these information shown by you concerning suchaquestion. It wasachallenging scenario for me personally, but witnessing the very specialised form you managed it made me to leap over delight. Extremely happier for your guidance and then trust you are aware ofapowerful job that you're putting in training some other people with the aid of your websites. I'm certain you have never come across any of us. jimmy choo shoes
by ilgmbjv@gmail.com at May 27 2019
Thank you for your whole hard work on this website. Betty enjoys participating in investigation and it's obvious why. My spouse and i learn all concerning the compelling form you create functional tactics via the website and in addition cause contribution from other people on the concept so my princess is always becoming educatedawhole lot. Take pleasure in the rest of the year. You're the one conductingafirst class job. canada goose
by qpqzbuvk@gmail.com at May 26 2019